Fomba fitsangatsanganana ~ Journey-Assist - Fampandehanana fitsangatsanganana
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Fomba fitsangatsanganana
Samy hafa ny fomba fitsangatsanganana. Ny iliny sy ny cons.
Ho - Mazava ho azy dia ny hafainganam-pandehan-drivotra. Indrindra fa rehefa nanao dia lavitra. Fa ny hafainganam-pandeha dia voalohany, mitahiry ny fotoana sarobidy aminao. Mitaky fiara amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby mandritra ny ora iray ianao mandritra ny andro iray. Ary koa, ny sidina dia ekena fa misy fomba fitaterana azo antoka. Amin'ity lafiny ity dia faharoa an'ny lamasinina fotsiny izy ireo.
- Fameperana entana feno entana. Toy ny fitsipika, ity dia 5-8 kg ho an'ny kitapo tanana, ary 23-30 kg ho an'ny entana ho an'ny entana ho an'ny mpandeha tsirairay. Mila mandoa vola be ianao vao mila andiana entana. Hentitra ny fameperana mikasika izay azo ampiharina. Amin'ny kitapo tanana, ohatra, dia tsy afaka mitondra ranon-tsaka ianao ao anaty fitoeran-drano mihoatra ny 100 ml. Ary koa, tsy misy zavatra mampalahelo (hety, rakitra fantsika, mpandoto fiara, sns). Izany rehetra izany dia tsy maintsy raisina raha te-hitety hazavana (amina kitapo tanana fotsiny). Ho fanampin'ny tena faharetan'ny sidina dia mila manampy adiny roa amin'ny fotoana hialana ianao (ny fotoana ilana anao any amin'ny seranam-piaramanidina mba hijery ny fisafoana sy fisavana, ary farafaharatsiny adiny iray aorian'ny fotoana hahatongavana (fifehezana pasipaoro sy fitakiana entana). tanàna, ary ity ny vidiny fanampiny ho an'ny serivisy famindrana, ary ny seranam-piaramanidina dia tsy hita manerana ny tanàna rehetra, izay mety hiteraka fanelingelenana ihany koa.
Karakarao ireo sakafo maivana.
Ho - Ny fitsangatsanganana amin'ny lamasinina no fomba mora indrindra mora azo. Ny haavon'ny lalamby sy ny lalamby any amin'ny saika ny firenena rehetra dia avo noho ny haben'ny seranam-piaramanidina indraindray. Ny toeram-piantsonana, toy ny fitsipika, dia eo afovoan-tanàna, ary mahatahotra ny famindrana io. Eo amin'ny fiaran-dalamby koa dia afaka mitondra sakafo sy zava-pisotro ianao amin'ny habetsaky ny ekena. tsy misy fetran'ny karatra toy ny fitsangatsanganana rivotra. (raha ny toerany dia 50 kg ny fetran'ny kitapo tanana). Afaka mandry amin'ny lamasinina ianao amin'ny alàlan'ny fahatongavana. Noho izany dia azonao atao ny miampita amin'ny alina, ary mankafy ny fahitana amin'ny andro. Mandritra izany fotoana izany, dia afaka mitahiry amin'ny hotely ianao. . Mora izany raha toa ka miaraka amin'ny fianakavianao na orinasa ianao, afaka mividy efitrano iray ianao, ary mahaliana ny mandany fotoana eny an-dalana. Ny fiaran-dalamby no fomba fitaterana azo antoka indrindra. (ny fitsangatsanganana lalamby azo antoka indrindra any Amerika, avy eo any Eropa, avy eo any Rosia, ary ny firenena Azia toa an'i India sy Sri Lanka, mijanona ao ambadiky ny fiarovana.
- Fomba somary milamina io dia lavitra io. Tsy toy ny Auto, ny fiaran-dalamby dia tsy hijanona izay toerana tianao. Ny haavon'ny fionona dia miankina amin'ny karazana fiara izay nividiananao ny tapakila. Ilay seza voatokana mitovy, tsy ilay toerana mahasoa amin'ny tontolon'ny lamasinina ary mety tsara amin'ny dia fohy.
Ny halavirana ny toerana misy anao dia avy amin'ny efitrano fidiovana, ny, noho ny antony mazava dia ho tsara kokoa.
Tsy manoro lalana hihinana sakafo mety ho simba izahay amin'ny lamasinina. Mazava ho azy fa aza avela hikarakara tsy an-drariny ny zavatra manasoa anao (tahirin-kevitra, sanda).
Karakarao ny "snacks" sy ny fisotroana rano.
Mandritra ny dia lavitra dia ho azonao antoka fa manao haingam-panafana indraindray, na indraindray mandeha an-kaleha.
Ho - Ny fiara amin'ny fiara dia ny fahalalahana asa indrindra. Azonao atao ny mampiato fotoana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na ny wag mana-dalana mankany amin'ny toerana tsy ahitana planina. Ary toa an'i Avia, afaka miampita ny sisintany amin'ny alàlan'ny fiara ianao miaraka amin'ny sakafo sy zava-pisotro. Ny fisian'ny "snacks" rehefa mandeha fiara, dia manavotra ny volanao sy ny fotoana. Ny fiara dia fiarovana amin'ny toetrandro, fahafaha-mifindra haingana eo anelanelan'ny toerana mahasarika, ary ny fahaizana mitondra izay rehetra ilainao amin'ny làlana. Tsy misy fahazoan-dàlana ho an'ny entana; voafetra amin'ny herin'ny fiara fotsiny ianao.
- Ity fomba ity dia tsy mety amin'ny fitsangantsanganana intercontinental. Miadana kokoa raha oharina amin'ny rivotra. Ary raha mila maka fotsiny avy hatrany amin'ny teboka B ka hatrany B, dia angamba tsy ny fomba tsara indrindra ny fiara. Somary mandreraka ihany koa ny mitondra fiara mandritra ny ora maro. Mandritra izany fotoana izany, misy foana ny loza ateraky ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana. Ary na dia mamaha ireo olana ireo aza ny fiantohana, dia mety hisy fiantraikany amin'ny drafitrao izany.
Ao anaty fiara, tsy maintsy manana kitapo fanampiana voalohany ianao, jiro mandrehitra, tariby hazavana, auto-péleururur, fehikibo vonjy maika, kodiarana kely, kitapom-batana, mpanadin-telefaona, mpitahiry fiara ary maro hafa.
Ho - Ny fitsangatsanganana fitateram-bahoaka no lasa malaza hatrany (indrindra any Europe). Ara-toekarena dia mahasoa kokoa noho ny fomba hafa andehanana, ankoatra ny fiaran-dalamby. Ary amin'ny fitsangatsanganana amam-bisy koa dia zotra mahasintona mahasamihafa. Amin'ny fitsidihana toy izany dia ahita ny tanàna sy ny tanàna ambanivohitra. Amin'ny fotoana fohy indrindra dia afaka mahita firenena maro ianao. Rehefa mitsangatsangana, tarika mikarakara ny fitsangatsanganana toy izany dia tsy tokony hijoro araka ny toerany. Tsy mila miatrika olana momba ny fandaminana. Ny zavatra rehetra dia atao sy dinihina ho anao. Amin'ny maha-fitsipika anao, mpitari-dalana mpitari-dalana dia miaraka aminao, izay azonao alahanao ny fanontaniana rehetra.
- ny minus voalohany dia ny bus ihany. Manokàna fotoana be ao anaty seza tsy dia milamina. Raha mora tohina aretina, dia tsy ho anao io fomba fitetezana io. Ny alina dia mijanona eo amin'ny sisin-tany. Matetika no fialam-boly tsotra ihany no tafiditra ao amin'ny vidin'ny fitsangatsanganana toy izany. Ny mpiara-mitety dia mety ho samy hafa. Tanora be sy izay maniry mangina dia olona antitra be. Mandeha ny fitsangatsanganana fiara-mpitory.
Akory ny aina any amin'ireo bus natolotra. Moa ve hisy fijanonana amin'ny alina. Ampidirina amin'ny vidiny ve ny fitsangatsanganana? Misy boaty 220v. Manandrama ihany koa hahitana ny fitenin'ny tarika.
Arosoy amin'ny "snacks" ary fisotro rano eny amoron-dalana.
Ho - Mety amin'ny fanovana matetika ny traikefa. Angamba fitsangatsanganana no tena mahazo aina. Aza mandany andro mitsangatsangana, satria mandritra ny dia dia afaka hahafinaritra ianao, manatrika fitsaboana spa, efitrano fisakafoanana sy dobo, mihinana sakafo fisakafoanana sy fisakafoanana isan-karazany. Isan'andro sy Sunsets miavaka any an-dranomasina! Rivotra ranomasina. Ny fitsangatsanganana toy izany dia miala sasatra indrindra amin'ny hozatra. Ny fahadiovana sy ny serivisy amin'ny takelaka fitsangantsanganana dia fibaikoana avo kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny. Mora ny misakana ny sakana fiteny. Ny mpiasa dia mazàna mahalala ny fiteninao.
- Aretina mikiky. Ny soritr'aretiny dia mora manimba ny fialan-tsasatrao. Ankoatr'izay, tsy ny olona rehetra te hahita ny ranomasina isan'andro ary tsy mahazo milomano ao. tsy mety ho an'izay matahotra ny rano na tany malalaka malalaka. Ankoatr'izany, mazàna mifankahalala amin'ny kolontsaina sy ny zava-misy any amin'ireo firenena notsidihina, dia tsy be dia be ny fotoana. Ny fanamafisana dia bebe kokoa amin'ny mandany fotoana amin'ny liner. Na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny sambo, dia fetra voafetra miaraka amin'ny andiany voafetra. Matetika ianao no mitsidika tanàna misy seranan-tsambo, ary tsy mahaliana indraindray.
Aza hadino fa ny transite dia transatlantic, izay midika fa tsy hahita ela ilay tany.
Raha toa ianao ka mety manana ranomasina, dia ho azo antoka fa manana ilay antsoina hoe "stabiliser roll" ilay sambo.
Ny fomba rehetra hivezivezena dia manana ny tombotsoany sy ny fahazoana azy. Mila misafidy eo amin'izy ireo ianao amin'ny alàlan'ny safidy manokana, toetran'ny vatana ary, mazava ho azy, ny asa fitsangatsanganana. 🙂